သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): "သပြေညို"ကို ငိုစေခဲ့တဲ့ ကျနော့်ကဗျာများ
မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီး ၆၄ နှစ်မြောက် သို့မဟုတ် ဆရာမင်းသုဝဏ် သပြေညိုကဗျာကို ရေးပြီး ၇၄ နှစ်တိတိ ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့မှာ ကျနော် ကဗျာတစ်ပုဒ် စပ်ပြီး ဘလော့ပေါ် တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကဗျာနာမည်လေးက "အစာမျှော်ငါးပိရည်ဖွဲ့ကဗျာ"တဲ့။ အဲဒီပို့စ်ရဲ့ အောက်မှာ ကွန်မင့်တွေ အသီးသီးပေးကြပါတယ်။ မေဓာဝီက "သပြေညို ကဗျာတစ်ပုဒ်နဲ့ လုပ်စားပေါင်းများနေပြီနော်"တဲ့။ ပြီးတော့ ကိုရင်ကလဲ "သပြေညိုနဲ့ ကစ်နေတာ များနေပြီနော်"တဲ့။ မြစ်ကျိုးအင်းကလဲ "သပြေညိုလဲ သဂျီးနဲ့တွေ့မှ ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းရတော့တယ်"တဲ့။ ကျနော့်လုပ်ရပ်တွေကို သူတို့ တော်တော်လေး သဘောပေါက်သွားကြပြီကိုး။ ဟုတ်ပါ့ ကျနော်လဲ သပြေညိုလေးနဲ့ ပို့စ်တွေ မွေးဖွားပေးခဲ့တာ အတော်လေး များလာခဲ့ပြီကော။
သပြေညိုလေးကို ဘေးမှာချထားပြီး သူနဲ့ အစပ်တူကဗျာမျိုးလေးတွေ ပြုစုပျိုးထောင်လာခဲ့တာ အခုမှ မဟုတ်။ ဟိုး ရှေးပဝေသဏီကထဲက ဖူးဖူးမှုတ် ပြုစု ပျိုးထောင်လာခဲ့တာကလား။ ဒီလိုနဲ့ မှတ်မှတ်ရရ သပြေညို ကိုယ်ပွါးလေးတွေကို ကျနော့်ဘလော့ပေါ် ပြန်ရှာဖွေမိခဲ့တယ်။ တွေ့ပါလေပြီ။ ကျနော့် ဘလော့ပေါ်မှာ ငါးပုဒ်။ ဟို ကက်စမင်းမွေးနေ့တုန်းက သူ့ဆီမှာ သွားမန့်တာက တစ်ပုဒ်။ စုစုပေါင်း ခြောက်ပုဒ်။ အဲ.. နောက်တစ်ပုဒ် ကျန်သေးတယ်။ မေဓာဝီဆီမှာ သွားမန့်ထားတာ။ ကွန်မင့်မှာ သူ ပြန်လာပြောမှ အမှတ်ရမိသွားတယ်။ အဲဒီလို အဲဒီလို လက်ဆော့ခဲ့တာ ကလား။ ဆိုတော့ကာ.. စုစုပေါင်း ခုနစ်ပုဒ်ပေါ့။
ဟိုယခင်တုန်းကတော့ ကိုယ်ပိုင်ပန်းချီပညာနှင့်ဓါတ်ပုံပညာ အားနည်းနေသေးတဲ့အတွက် ပုံများကို ဂူဂဲလ်ကနေပြီး ခိုးယူလေ့ရှိပါတယ်။ အခုတော့ ထိုပညာရပ်များကို တစ်ဘက်ကမ်းခတ် တတ်မြောက်ခဲ့ပြီမို့ ကိုယ်တိုင်ရေး ပန်းချီများ ကိုယ်တိုင်ရိုက် ဓါတ်ပုံများဖြင့် ကျနော့်ဘလော့ပေါ်မှာ ဝေေ၀ဆာဆာ တင်ပြနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ကျနော့်ရဲ့ ပန်းချီလက်ရာကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့သူတွေလဲ မနည်းပါဘူး။ ဥပမာ "အစာမျှော်ငါးပိရည်ဖွဲ့ကဗျာပို့စ်"မှာ တင်ခဲ့တဲ့ ငါးပုံ ပန်းချီကားမျိုးလိုပေါ့။ အတော်များများ ချီးကျူးကြပါတယ်။ အဲဒီလို ချီးကျူးသံကြားရတော့ ကျနော် ကြိုးစားခဲ့ရကျိုး နပ်တာပေါ့။ မဟုတ်လား။း)
ကဲ.. သပြေညို ကိုယ်ပွါးလေးတွေကို နေရာ ပေးလိုက်ကြဦးစို့ရဲ့။ ပထမ ကဗျာက ဆရာမင်းသုဝဏ်ရဲ့ သပြေညို အစစ်။ နောက်ဟာတွေအားလုံးကတော့ ကျနော့် လက်ရာ သပြေညို အတုလို့ဘဲ ဆိုကြပါစို့ဗျာ။း)
သူ စိုက်ခဲ့တဲ့ ချစ်မှတ်တိုင်
ငါ စိုက်ခဲ့တဲ့ ချစ်မှတ်တိုင်။
ပျို့ အချွဲမှာ ကိုယ့်သဲလှိုက်သမို့
အောင် နိမိတ်မှန်း။ ။
မွေးနေ့မှာ ထွေးပွေ့စရာ ရှားပါတဲ့
တို့ပြည်က တို့အဆွေ ပို့ခဲ့ပါတဲ့
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 13:56
Wednesday, 11 January 2012 at 14:05:00 GMT
ဆရာမင်းသုဝဏ် သုဿာန်ကထပြီး ဒုတ်ကောက်နဲ့ လာရိုက်တော့မှာပဲ။ အတော်ဆော့တဲ့ သဂျီး။
Wednesday, 11 January 2012 at 14:42:00 GMT
ဟဟ.. အဲ့သပြေညိုက အဲ့လို ရာဇ၀င်နဲ့ကိုး..
ဘာဖြစ်ဖြစ် ကဗျာထဲမှာ ကန်ဒီ့နာမည်ပါတယ်.. ဟိဟိဟိ ပျော်လိုက်တာ ;P :P :P
Wednesday, 11 January 2012 at 15:28:00 GMT
ဟွင်း...တဂျီး....ပြောကာမှ သပြေညိုနဲ့ လုပ်စားတွားပြန်
Wednesday, 11 January 2012 at 15:38:00 GMT
တဂျင်းမီးရဲ့ သမိုင်းတွင်မဲ့ 'သပြေညို' ခံစားရင်း
ကိုကိုမောင် ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးက ကောင်းမှကောင်းး))
ကိုကိုမောင် ပျိုပျိုရှောင်ရင်း အိုအိုဆောင်သွားမှဖြင့် :P
ကဗျာစပွန်ဆာလုပ်ရင် လက်တို့လိုက်အုံးနော် ဟိဟိ။
Wednesday, 11 January 2012 at 16:09:00 GMT
ခေတ်လေးကောင်လေး လုပ်ထားဟဲ့.. :D
Wednesday, 11 January 2012 at 17:26:00 GMT
Wednesday, 11 January 2012 at 19:02:00 GMT
ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ဒီလို အထပ်ထပ်ပွားပြီး ခံစားနိုင်တဲ့ အနုပညာ
ချီးကျူးပါရဲ့ အကြောင်းအရာ မထပ်အောင်ကို ရေးနိုင်တယ်။
ဘာလို့ဆိုတော့ ဖတ်နေရင်းနဲ့ ငပိရည်နံ့ပါ ရလာသလိုလို ခံစားလိုက်ရတယ်။
Thursday, 12 January 2012 at 02:09:00 GMT
Thursday, 12 January 2012 at 02:25:00 GMT
ဘာပဲပြောပြော.. ကဗျာဥာဏ်ဖျင်းလွန်းတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ တကယ့်ကို ဖတ်လို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ ကဗျာလေးတွေပါပဲ... သူကြီးရေ..း))
Thursday, 12 January 2012 at 02:48:00 GMT
ခွိခွိ . .
သူတို့ ပြောတဲ့ အတိုင်းပဲ။
Thursday, 12 January 2012 at 02:58:00 GMT
သဂျီး မေ့တတ်လိုက်တာ ဒီမှာ တပုဒ်ရှိသေးတယ်။
http://maydar-wii.blogspot.com/2010/08/blog-post_17.html ဒီပို့စ်မှာ လာမန့်ထားတာလေ ... ဟွန်းဟွန်း ... ကျန်နေမှာစိုးလို့ စေတနာ ဗလပွနဲ့ လာပြောတာနော်။
Thursday, 12 January 2012 at 11:58:00 GMT
ဒီဇင်ဘာနဲ့ စပယ်ချိုဆိုတဲ့ ကဗျာက ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာမှာ ရေးတာလား။ ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာက ရောက်တောင် မရောက်သေးဘူး။ သဂျီးကတော့ လုပ်ပြီ တလွဲ။ တော်တော် အသက်ကြီးချင်နေပုံရတယ်။ နေ့စွဲပြန်ကြည့်အုံး။
Thursday, 12 January 2012 at 12:01:00 GMT
တစ်ကယ်တော်တဲ့ အကို......:):) အားကျထှာနော်...
Thursday, 12 January 2012 at 18:17:00 GMT
ဟုတ်ပါ့ဗျာ... မေဓာဝီလာပြောမှဘဲ သူ့ဆီ သွားမန့်ထားခဲ့တဲ့ ကဗျာ အမှတ်ရမိလာတော့တယ်။ သူ့ဆီမှာ ဟိုတုန်းက ပို့စ်တိုင်းနီးပါးကဗျာလေးတွေနဲ့ဘဲ ကွန်မင့်ပေးနေကျဆိုတော့ သပြေညို အလိုက် ကဗျာ ပါသွားမှန်း သတိမထားမိလိုက်ဘူး။ ကဗျာတွေ များသွားလို့ ထင်ပါရဲ့။ အခု အဲဒီ ကဗျာလေးကို ပြန်တင်လိုက်ပါပြီ။
ပြီးတော့ ခုနစ်သက္ကရာဇ်မှားနေတာကိုလဲ ပြန်ပြင်လိုက်ပါပြီ။ ကျေးဇူးပါ မေဓာဝီ။
Thursday, 12 January 2012 at 20:21:00 GMT
Thursday, 12 January 2012 at 21:27:00 GMT
သယ်ဂျီးလက်စွမ်း ရမ်းချက်ကတော့း) ဒါနဲ့များ
မိန်းမမယူနိုင်သေးပါလားဟားဟားး)း)
Friday, 13 January 2012 at 14:07:00 GMT
ကောင်းတယ် ဗျာ ... ကာရံ တုထား တယ် ဆိုပင်မဲ့
အရမ်းကောင်း တယ် ဗျာ ...
Friday, 13 January 2012 at 15:02:00 GMT
Friday, 13 January 2012 at 21:51:00 GMT
သူကြီးရဲ့ ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီးတာကြာပြီ...
အားကျမခံ သပြေညိုကို စာမြောင်ကပ်ပြီး ကွန်မန့်ပေးမလို့ ကြိုးစားနေတာသုံးလေးရက်ရှိပြီ... နှစ်ပိုဒ်ကနေကို မတက်လို့ လက်လျှော့လိုက်ရတယ်...
ဒါပေမယ့် တစ်ပုဒ်တော့ မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကို ရေးဦးမယ်လို့တော့ အားခဲထားပါကြောင်း...
Thursday, 19 January 2012 at 14:01:00 GMT
work? I am completely new to writingablog but I do write in
my diary daily. I'd like to startablog so I will be able to share my personal experience and views online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers. Thankyou!
My site; arion